Levitikọs 18 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ụdị mmekọahụ ndị na-adịghị mma (1-30)
Unu emela ka ndị Kenan (3)
Ndị bụ́ otu ọbara inwe mmekọahụ (6-18)
Mgbe nwaanyị na-ahụ nsọ ya (19)
Nwoke na nwoke ibe ya inwe mmekọahụ (22)
Mmadụ na anụmanụ inwe mmekọahụ (23)
‘A ga-achụpụ unu n’ala ahụ ma ọ bụrụ na unu adịghị ọcha’ (24-30)
18 Jehova gwakwara Mosis, sị: 2 “Gwa ndị Izrel okwu, sị ha, ‘Abụ m Jehova bụ́ Chineke unu.+ 3 Unu akpala àgwà otú ndị Ijipt unu biri n’ala ha na-akpa. Unu emekwala ihe ndị bi na Kenan, bụ́ ebe m na-akpọga unu, na-eme.+ Unu esokwala omenala ha. 4 Unu ga na-eme ihe niile m kpebiri, na-edebekwa iwu m niile ma na-eso ha.+ Abụ m Jehova bụ́ Chineke unu. 5 Unu ga na-edebe iwu m, na-emekwa ihe m kpebiri. Onye ọ bụla na-eme otú a ga-adị ndụ maka na ọ na-eme ha.+ Abụ m Jehova. 6 “‘Ya enwela onye ọ bụla n’ime unu ga-agakwuru onye ọ bụla bụ́ onye ikwu ya ka ya na ya nwee mmekọahụ.*+ Abụ m Jehova. 7 Gị na nna gị enwela mmekọahụ. Gị na nne gị enwekwala mmekọahụ. Ọ bụ nne gị, gị na ya enwela mmekọahụ. 8 “‘Gị na nwunye nna gị enwela mmekọahụ.+ Ime otú ahụ bụ imenye nna gị ihere.* 9 “‘Gị na nwanne gị nwaanyị enwela mmekọahụ, ma ọ̀ bụ nwa nwaanyị nna gị mụrụ ma ọ̀ bụ nwa nwaanyị nne gị mụrụ, ma à mụrụ gị na ya n’otu ụlọ ma à mụrụ ya n’ebe ọzọ.+ 10 “‘Gị na nwa nwaanyị nwa gị nwoke mụrụ ma ọ bụ nwa nwaanyị nwa gị nwaanyị mụrụ enwela mmekọahụ n’ihi na ime otú ahụ bụụrụ gị ihe ihere.* 11 “‘Gị na nwa nwaanyị nwunye nna gị mụrụ, bụ́ nwa nna gị, enwela mmekọahụ, n’ihi na ọ bụ nwanne gị nwaanyị. 12 “‘Gị na nwanne nna gị nke nwaanyị enwela mmekọahụ. Ya na nna gị bụ otu ọbara.+ 13 “‘Gị na nwanne nne gị nke nwaanyị enwela mmekọahụ n’ihi na ya na nne gị bụ otu ọbara. 14 “‘Gị na nwunye nwanne nna gị nke nwoke enwela mmekọahụ, ka ị ghara isi otú ahụ menye nwanne nna gị ihere.* Ọ bụ nwunye nwanne nna gị.+ 15 “‘Gị na nwunye nwa gị enwela mmekọahụ.+ Ọ bụ nwunye nwa gị nwoke. Gị na ya enwela mmekọahụ. 16 “‘Gị na nwunye nwanne gị nwoke enwela mmekọahụ+ n’ihi na ime otú ahụ bụ imenye nwanne gị nwoke ihere.* 17 “‘Gị na nwaanyị ọ bụla na nwa ya nwaanyị enwela mmekọahụ.+ Alụrụla nwa nwaanyị nwa ya nwoke mụrụ ma ọ bụ nwa nwaanyị nwa ya nwaanyị mụrụ ka gị na ya na-enwe mmekọahụ. Ha na ya bụ otu ọbara. Ọ bụ omume rụrụ arụ.* 18 “‘Alụla nwaanyị lụọkwa nwanne ya nwaanyị ka ọ bụrụ nwunye di ya,+ gị na ya ana-enwe mmekọahụ mgbe nwanne ya nwaanyị ka nọ ndụ. 19 “‘Agakwurula nwunye gị* ka gị na ya nwee mmekọahụ n’oge ọ na-adịghị ọcha, mgbe ọ na-ahụ nsọ ya.+ 20 “‘Gị na nwunye mmadụ ibe gị* enwela mmekọahụ. Ị ga-abụ onye na-adịghị ọcha ma i mee otú ahụ.+ 21 “‘Ekwela ka e were nwa gị ọ bụla nye Molek.*+ Emela otú a ka ị ghara imebi aha Chineke gị.+ Abụ m Jehova. 22 “‘Gị na nwoke ibe gị enwela mmekọahụ.*+ Ọ bụ arụ. 23 “‘Nwoke na anụmanụ ekwesịghị inwe mmekọahụ. Nwoke mere otú ahụ ga-abụ onye na-adịghị ọcha. Nwaanyị ekwesịghịkwa ịgakwuru anụmanụ ka ya na ya nwee mmekọahụ.+ Ọ bụ arụ. 24 “‘Unu emela nke ọ bụla n’ime ihe ndị a ka unu ghara ịbụ ndị na-adịghị ọcha, n’ihi na ọ bụ ihe ndị a niile ka mba ndị m na-achụpụrụ unu nọ na-eme wee bụrụ ndị na-adịghị ọcha.+ 25 N’ihi ya, ala ha adịghị ọcha. M ga-atakwa ndị bi na ya ahụhụ maka mmehie ha. A ga-achụpụ ha n’ala ha.*+ 26 Ma ununwa ga na-edebe iwu m, na-emekwa ihe m kpebiri.+ Unu emekwala nke ọ bụla n’ime arụ ndị a, ma nwa afọ ma onye mbịarambịa nke binyeere unu.+ 27 N’ihi na ọ bụ arụ ndị a niile ka ndị biri n’ala a nọ na-eme,+ nke mere na ala a adịghịzi ọcha. 28 A gaghịkwa achụpụ unu n’ala a otú a ga-achụpụ* mba ndị bi na ya tupu unu erute maka na unu agaghị emerụ ala a. 29 Ọ bụrụ na e nwee ndị na-eme nke ọ bụla n’ime arụ ndị a, a ga-egbu ha niile.* 30 Unu ga na-eme ihe niile m chọrọ ka unu na-eme ma ghara ime nke ọ bụla n’omenala rụrụ arụ ndị bi tupu unu erute nọ na-eme,+ ka omume ndị ahụ ghara ime ka unu bụrụ ndị na-adịghị ọcha. Abụ m Jehova bụ́ Chineke unu.’”
^ N’amaokwu a nakwa n’amaokwu ndị na-esonụ, otú e si dee “inwe mmekọahụ” na Hibru bụ “ikpughe ọtọ.”
^ Na Hibru, “Ọ bụ ọtọ nna gị.”
^ Na Hibru, “ha bụ ọtọ gị.”
^ Na Hibru, “kpughee ọtọ nwanne nna gị.”
^ Na Hibru, “ọ bụ ọtọ nwanne gị nwoke.”
^ Ma ọ bụ “omume na-eme ihere.”
^ O nwekwara ike ịbụ iko mmadụ ka a na-ekwu.
^ Ma ọ bụ “onye agbata obi gị; enyi gị.”
^ Ma ọ bụ “chụọrọ Molek àjà.”
^ Na Hibru, “Gị na nwoke edinala otú nwoke na nwaanyị si edina.”
^ Na Hibru, “Ala ha ga-agbọpụ ha.”
^ Na Hibru, “Ala a agaghịkwa agbọpụ unu otú ọ ga-agbọpụ.”
^ Na Hibru, “a ga-esi ná ndị ha gbupụ ha.”